Kungani ukhetha i-LGLPAK LTD ukukhiqiza izikhwama zevesti eziphrintiwe?
Isikhwama sekhava yesudi yesikhumba
Izikhwama zesangweji le-Polythene
Lapho amakhasimende amaningi ekhetha ukusebenzisa izikhwama zesikibha eziphrintiwe, azokhetha abakhiqizi bepulasitiki abaguquguqukayo ukwenza ngokwezifiso izikhwama zabo zezikibha eziphrintiwe. Lokhu akuqhubeki nesitayela sabo kuphela, kugcina ubunye bomkhiqizo, futhi kudala ukubonakala, kepha futhi ukunaka kwabahwebi emininingwaneni enqubweni yokuthengiswa komkhiqizo nemikhiqizo kukhombisa ubuchwepheshe babo futhi kungenye yezindlela eziphambili zokuthuthukisa inzuzo yabo yokuncintisana.
Kulezi zinsuku, kunabakhiqizi abaningi bezikhwama zokuphrinta izikibha, ngakho-ke kungani ukhetha i-LGLPAK LTD?
Ithimba lethu: I-LGLPAK LTD ibilokhu ikhonza amakhasimende ngenhliziyo yonke njengenhloso yayo. Izisebenzi zebhizinisi zenkampani zinokuhlangenwe nakho okungaphezulu kweminyaka eyishumi kuzinsizakalo zokupakisha eziguquguqukayo zepulasitiki futhi zinekhwalithi enhle kakhulu yobuchwepheshe. Abasebenzi bebhizinisi bahlala eceleni usuku lonke, inqobo nje uma ikhasimende liyidinga, noma ngabe iyiphi inkinga. Sizophendula kumakhasimende kungakapheli amahora angama-24. Umnyango wokukhiqiza wenkampani uzonquma ukusetshenziswa komkhiqizo ngokushesha nje lapho uthola isampula lekhasimende, ulinganise usayizi womkhiqizo, isisindo, i-ductility nenye idatha, uhlaziye ukucaca, inqubo yokuphrinta, umbala nezinye izinto, lapho sinokuqonda okuphelele kwesampula Kungaleso sikhathi kuphela lapho izongena khona kusixhumanisi sokuqinisekisa, isebenzise ngokuqinile inqubo yokuqinisekisa futhi ithole ukuqinisekiswa kwekhasimende ukuqala ukukhiqizwa ngobuningi, ukuqalisa inqubo yokuhlola inqwaba kanye nohlelo lokubhekela izikhwama. Kubalulekile ukuthi sisho ukuthi sizoxhumana nabasebenzi kusixhumanisi ngasinye somkhiqizo ukubenza baqonde ukusetshenziswa komkhiqizo futhi balengise amasampula eziteshini zabo zokusebenza ukuthuthukisa ukuqwashisa kokulawulwa kwekhwalithi kwawo wonke umuntu nokuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yokukhiqiza iyahambisana namasampula.
Inqubo yethu yokuphrinta: Ukuvela kwesikhwama sevesti esiphrintiwe kunqunywa inqubo yokuphrinta. I-LGLPAK LTD yenze ukulungiswa okungekhona okujwayelekile ngesikhathi sokuphrinta komkhiqizo-ukunciphisa isinqumo. Le ndlela yokusebenza elula ebonakala iphikisana nobuchwepheshe obuthuthukisiwe inyusa ngqo umphumela wokuphrinta womkhiqizo uye ezingeni elisha. Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo, imikhiqizo yepulasitiki ephrintiwe yinkampani yethu iyabonakala ngokubonakalayo: imibala icacile kakhulu futhi amaphethini acacile.
Ukulawulwa kwekhwalithi yethu: Abaholi benkampani bahlale bebeka ukulawula ikhwalithi yomkhiqizo njengokuhamba phambili. Njengomkhiqizi wokupakisha oguquguqukayo wepulasitiki oneminyaka engaphezu kweyishumi yokuhlangenwe nakho, inkampani yethu iphinde yaqongelela ulwazi oluningi ekulawuleni ikhwalithi: ukugcina ukuzinza kwenqubo, Ngemuva kokuthi i-LGLPAKLTD ithola imvume yekhasimende, izohlala igcina inqubo yokuqinisekisa ukuthi ikhwalithi ihambisana ngokuphelele kusuka kusampula kuya kumkhiqizo ophelile; naka yonke imininingwane yokukhiqiza bese usungula umuzwa wokuvimbela: uma kutholakala okungajwayelekile ekukhiqizeni, bamba imbangela, noma ngabe bekungakanqunywa, kuzothinta umkhiqizo. Uma ikhwalithi inomthelela, kufanele siqaphele kakhulu, noma ngabe kubiza kakhulu. Ngisho nokukhiqizwa okuqhubekayo, imininingwane nemininingwane yezinsuku ezimbili ngaphambi nangemva kufanele ibuyekezwe; Isistimu yesibopho somenzi wesikhwama: Inkampani yethu ibilokhu ihambisana "nendlela yokwenza umthwalo wesikhwama" indlela yokuphatha ikhwalithi, okwenza ukulawula ikhwalithi yomkhiqizo kube umthwalo wabo bonke abenzi besikhwama. Qala ukugadwa kwekhwalithi yomkhiqizo kusuka kumbangela eyinhloko.
Umthwalo wethu wokulayisha: Lapho sibhekene nezindleko ezanda njalo zezimpahla, i-Guangli Packaging Co, Ltd. icabanga ngalokho amakhasimende akucabangayo nokuthi yini amakhasimende angafinyelela kuyo, futhi wethule uchungechunge lwezixazululo ezisebenzayo ukukhulisa inani lemithwalo nokunciphisa ikhasimende Impahla yokuqala ingaphansi kakhulu. Okokuqala, nokwandisa izinga lokupakisha: I-LGLPAK LTD yakha indlela efanelekile yokupakisha ngokuya ngesipiliyoni sesikhathi eside sokupakisha kanye nokubalwa okunembile kosayizi wesitsha. Umshini wokupakisha osetshenzisiwe uhlobo olusha lomshini wokupakisha othuthukiswe ngokwawo. Umkhiqizo uvalwe kahle, muhle, futhi ngosayizi omncane, ongaqinisekisa ukufakwa. Khulisa inani lamakhabethe. Okwesibili, sinamathela kumgomo wokuthi iziqukathi ezingakaze zibe nalutho: uma kusekhona isikhala esitsheni ngemuva kokulayishwa, noma ngabe inani leziqukathi selifinyelele kunombolo yenkontileka, sizoxhumana nekhasimende ngokushesha okukhulu bese sibeka iziphakamiso ezizwakalayo ikhasimende, njengokugcwalisa enye imali Yokuthengisa ukunciphisa izindleko zokuhamba kwamakhasimende. Ekugcineni, sizibophezele ekubeni yisazi sokupakisha kumakhasimende ethu, nokuxazulula uchungechunge lwezinkinga zokupakisha eziguquguqukayo zamakhasimende ezinolwazi lomkhakha wobuchwepheshe ngokombono wekhasimende.
Kungani ukhetha i-LGLPAK LTD lapho ukhetha isikhwama sevesti esiphrintiwe? Ngoba asibona ochwepheshe kuphela kepha futhi sizinikele!
Isikhathi Iposi: Oct-22-2021